Amafu angaqondakali we-Morning Glory nezimbangela zawo ezingaba khona | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukubukwa Kwasemoyeni kwamafu amaningi enkazimulo yasekuseni
Amafu we-Morning Glory, ngeSpanish, amafu enkazimulo yasekuseni noma amafu ahambayo, angenye yamafu angavamile akhona. Zivame ukutholakala phakathi kwePapua New Guinea ne- Australia, eGulf of Carpentaria, oLwandle i-Arafura. Ziyavela phakathi kwenyanga kaSepthemba neka-Okthoba, futhi lapho kubonakala sengathi konke sekutholakele futhi kwachazwa, lawa mafu angumthetho oqinisekisa okuhlukile. Ukwakheka kwayo akuqinisekile.
Izikhathi eziningi ziye zabonwa eMexico, e-United Kingdom, eCanada noma eBrazil. Ochwepheshe bazamile ukutadisha imvelaphi nesizathu sokwakhiwa kwayo, ngaphandle kokufinyelela esivumelwaneni ngokwakhiwa kwayo.. Ngaphezu kwalokho, isimilo sabo sikude kakhulu namafu ajwayelekile esijwayele ukuwabona. Imfihlakalo ezungeze bona iyanda.
Anjani amafu enkazimulo yasekuseni?
Zingalinganisa ubude obungamakhilomitha ayi-1.000 XNUMX, cishe ukuqala kwenhlonhlo yase-Iberia. Usayizi wayo usukela ku- 1 kuya 2 amakhilomitha ukuphakama. Ngaphezu kwalokho, zivame ukuhambisana nomoya onamandla, ukuqubuka kanye nesheya ezisezingeni eliphansi. Engxenyeni yayo engaphambili kukhona ukunyakaza okusheshayo kwamaphasela womoya aqonde mpo, yilokhu okubasiza ukuba babe nalolu hola oluyisimo esiyisiyingi. Ngenxa yokuphakama okuphezulu, ukufuduka kwayo kufinyelela ku-60km / h! Kanye kanye nomoya oyenza igingqike, njengoba sikwazi ukubona kuvidiyo, ukuyibuka kukhiqiza umuzwa oshaqisayo.
Yize lo mkhuba ungacaciswanga ngokuphelele, kunezimbangela ezithile ezibangelwa. Ezinye zeziphetho esezifinyelelwe, kungakhathalekile ubunzima obubangelwa yikho, lokho iningi lazo lenziwa ukusakazwa kwe-mesoscale okuhambisana nomoya wasolwandle ekhona ezindaweni. Amasistimu angaphambili kanye nengcindezi ephezulu edingekayo abukeka ethanda ukwakheka kwawo. Vele, lapho umswakama uphakeme, okuyisisekelo kuwo wonke amafu futhi, ngaphezu kwakho konke, lapho umoya ushaye ngamandla ngayizolo. Yiba ngangokunokwenzeka, kunoma yikuphi, umbono omkhulu ongawubona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amafu angaqondakaliyo we-Morning Glory nezimbangela zawo ezingaba khona